Wararka - Sababaha iyo tallaabooyinka kahortagga ee rarka suunka oo siibanaya
Sababaha iyo tallaabooyinka kahortagga ee rarka suunka sibiibixitaanka
1. Xiisadda suunka oo aan ku filnayn
Haddii suunku uusan lahayn xiisad ku filan, ma jiri doonto xoog ku kala-wareejin xoog leh inta u dhexeysa gawaarida wadista iyo suunka, mana awoodi doono inay jiido suunka oo ay rarto dhaqdhaqaaqa.
Qalabka xiisadda ee wareejinta suunka badanaa waxaa ku jira xiisad fur, xiisad hidde ah, xiisad dubbaal culus iyo xiisad baabuur. Faalig ku filan ama sixitaan aan habboonayn oo ah fur ama qalabka xiisadda hidde, miisaanka oo aan ku filnayn qalabka xiisadda dubbaarka culus iyo aaladda xiisadda nooca baabuurka, iyo mashiinka mashiinka ayaa sababi doona xiisad aan ku filnayn qaadista suunka oo sababa.
1) Wareejiyaha suunka oo leh qaab-dhismeedka xiisad wareegga ah ama hidda-socodka ayaa kordhin kara xiisadda adoo hagaajinaya istaroogga kacsan, laakiin mararka qaarkood istaroogga qalalaasaha kuma filna oo suunka ayaa leh isbeddel joogto ah. Waqtigaan, qayb ka mid ah suunka ayaa loo goyn karaa si loogu shubo mar kale.
2) Wareejiyaha suunka oo leh xiisad dubbaal culus iyo qaab dhismeedka xiisadda baabuurta waxaa lagu daaweyn karaa iyadoo la kordhinayo miisaanka miisaanka culus ama laga takhalusi karo macaanka farsamada. Waa in la ogaadaa in markii la kordhinayo qaabeynta qalabka xiisadda, lagu dari karo suunka iyada oo aan la siibiqeyn, mana haboona in wax badan lagu daro, si aan suunkaasi u qaadin xiisad xad-dhaaf ah oo aan loo baahnayn iyo in la yareeyo noloshiisa adeeg. .
2. Durbaanka wadista ayaa si dhab ah loo xiray
Durbaanka wadista ee rarka suunka waxaa guud ahaan lagu daaweeyaa daahan caag ah ama shubay, iyo herringbone ama jeexdin dheeman lagu dari doonaa dusha caag si loo hagaajiyo isku dheelitirka khilaaf iyo kordhinta khilaafaadka. Markuu muddo dheer soconayo, dusha caagga ah iyo jeexitaanka durbaanka wadista ayaa si dhab ah loo xirayaa, taas oo yareyn doonta isku dheelitirka khilaafaadka iyo isqabqabsiga dusha durbaanka wadista waxayna sababi doontaa suunka inuu siibto.
Xalka: haddii ay xaaladan tahay, habka dib loogu duubto ama loogu beddelo durbaanka waa in la qaato. Baadhitaanka maalinlaha ah, waa in fiiro gaar ah loo yeesho kormeerka duubista durbaanka wadista, si looga fogaado in xirashada xad-dhaafka ah aan lagu heli karin waqtiga, taas oo keeneysa suunka inuu siibto oo saameyn ku yeesho hawlgalka caadiga ah.